Arimaha Bulshada – Page 57 – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Home»Archives»Arimaha Bulshada (Page 57)
Baaritaano saakay ka Socda duleedka Boosaaso.
By admin on 14/01/2019 Arimaha Bulshada, Wararka HNN
Isniin, Janaayo, 14, 2019, (HNN) Ciidamada Amaanka ayaa Saakay baaritaano ka wada duleedka Magaalada Boosaaso ee Gobalka Bari. Baaritaankan ayaa ka dambeeyay kadib markii xalay Ciidamada Puntland lagu qarxiyay Deegaanka Bali Qadar ee buuraha Galgala ee Gobalka Bari. Saraakiisha Puntland ayaa sheegay inay baadi goobayaan xubnaha ka tirsan Al-Shabaab iyo Daacish. Gobalka Bari ayaa waxaa […]
By admin on 13/01/2019 Arimaha Bulshada, Wararka HNN
Axad, Janaayo-13-2019(HNN) Gabar ardayad ah ayaa laga eryey Jaamacadda ugu faca wayn dalka Masar ee Al Azhar ka dib markii laga daawaday muuqaal iyadoo xabadka ku salaamaysa wiil kale ardayda jaamacada ka mid ah. Video lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujiyay labadaan arday oo ku sugnaa goob maqaayad ah, waxaana ka muuqday Wiilka ardayga ah oo […]
Axad, Janaayo-13-2019(HNN) Booliiska dalka Britain ayaa bilaabay baaritaan la xiriira dil magaalada Bristol Jimcihii loogu geystay wiil Soomaali ah Wiilka ayaa lagu magacaabi jiray Bashiir Cabdullaahi, waxaana da’diisa lagu sheegay 25 sano jir taksiile ah sida ay warbaahinta u sheeegeen eheladiisa. Sarkaal ka tirsan Ciidanka Booliska ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen ninkii ka […]
Mareykanka oo Doonaya in uu Turkiga la gaaro Heshiis lagu Badbaadinayo Kurdiyiinta Siiriya
Axad, Janaayo-13-2019(HNN) Khilaafka Turkiga iyo Mareykanka ee ka dhashay isbaheysigii ka dhexeeyay Kurdishka iyo Mareykanka ayaa hareeyay socdaalka Pompeo ee Bariga Dhexe. Balse waxa uu Pompeo u sheegay warfidiyeenada inuu arrintaan kala hadlay dhigiisa Turkiga uuna rumeysan yahay suuragalnimada heshiis laga gaaro. Heshiiskaayaa ayaa waxaa kamid noqon doono mid u ogolaanaya Turkiga inuu dalkiisa ka […]
DHAGEEYSO:-Barnaamijka Haweenka ee Radio Beerlula,
Axad, Janaayo-13-2019(HNN) waxaan idin soo gudbineeyna Barnaamijka Haweenka Radio Beerlula, ee magaalada Baladweyne, waxaa soo jeedinaya:-Kowsar Qaliif Cali waxaa farsameynaya:-Maxamed Yuusuf Cabdulaahi https://www.facebook.com/Beerlularadio/videos/2156627181256641/?t=9
Axad, Janaayo-13-2019(HNN) Duqa Muqdisho ahna Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) ayaa sheegay in ujeedka ugu muhiimsan ee tirakoobka shaqaalaha Dawladda Hoose ay tahay sidii la iskugu xiri lahaa nidaamka shaqaale ee Dawladda dhexe iyo kan Maamulka, si meesha looga saaro dadka labadaMaamulka Gobolka Banaadir Guddoomiyaha ayaa tilmaamay in Maamulka Gobolka Banaadir […]
DHAGEEYSO:-Warka Subaxnimo ee Radio Beerlula
Axad, Janaayo-13-2019(HNN) waxaan idin soo gudbineeyna Warka Subaxnimo Radio Beerlula, ee Magaalada Baladweyne waxaa soo jeedinaya:-Maxamed Cabdi Saneey Waxaa Farsameeynaya:-Maxamed Yuusuf Cabdulaahi https://www.facebook.com/Beerlularadio/videos/233077810941149/?t=6
By Ciise Cabdi Ciise on 13/01/2019 Arimaha Bulshada, Wararka HNN
Axad, Janaayo-13-2019(HNN)Dhaq dhaqaaqyo ciidan ayaa ka socda duleedka degmada Afmadow ee Gobolka Jubadda Hoose, iyadoo ciidamada Jubbaland ay ku wajahan yihiin deegaanada ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab. Sida ay wararku sheegayaan ciidamo ka tirsan Jubbaland oo maalmihii la soo dhaafay lagu diyaarinayay Afmadow ayaa u dhaq dhaqaaqay dhanka deegaanada Shabaabka maamulaan ee Gobolka Jubbada Dhexe. […]
Al-Shabaab oo burburiyay Isgaarsiin ku yaalla gudaha Kenya
Axad, Janaayo-13-2019(HNN)Al-Shabaab ayaa la sheegay inay bur buriyeen Isgaarsiin ku yaalla deegaano ka tirsan Gaarisa ee Gobolka Waqooyi Bari Kenya. Sida ay qoreen warbaahinta Kenya anteenooyinka ay burburiyeen Al-Shabaab ayaa u adeegsaday waxyaabaha qarxa. Anteenooyinka ayaa waxaa leh Shirkadda Safaricom oo ah Shirkadda Isgaarsiinta ugu weyn dalka Kenya. Wararka ayaa sheegaya in dagaalamayaal ka tirsan […]
Faah Faahin: Weerar bambaano oo lagu qaaday guriga guddoomiye degmada Dayniile
Axad, Janaayo-13-2019(HNN) Faah faahin ayaa ka soo baxaya weerar bambaano oo xalay lagu qaaday Guriga Guddoomiyaha degmada Dayniile Maxamed Abuukar Jacfar oo ku yaalla degmada Howlwadaag. Ugu yaraan labo ruux ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen weerarka bambaano, kuwaasoo ahaa ilaalada Guddoomiyaha. Wararka ayaa intaa ku daraya in rasaas ay fureen Ilaalada Guddoomiyaha ay ku geeriyootay […]